Horudhaca: Liverpool Vs Manchester City _ Wax walba oo aad uga baahan tahay kulanka adag ee FA Community Shield – Gool FM
(London) 04 Agoosto 2019. Maanta waxaa la ciyaarayaa kulanka koobka FA Community Shield, iyadoo Manchester City iyo Liverpool ay koox waliba eegeyso inay hanato koob bilowga xilli ciyaareedka cusub ee 2019-20.
Kulankan Community Shield ayaa waxa uu Liverpool iyo Man City ku dhexmari doonaa garoonka Wembley ee ku yaala Magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska.
Kooxda ku guuleystay horyaalka Premier League iyo FA Cup-ka ee Manchester City ayaa FA Community Shield la ciyaari doonta kooxda kaalinta labaad ka gashay horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkii hore ee Liverpool.
Tartanka: FA Community Shield
Taariikhda: Axad, 04 Agoosto 2019
Garoonka: Wembley (London).
Daafaca kooxda Liverpool ee Nathaniel Clyne ayaa garoomada ka maqnaan doona lix bilood kaddib dhaawac halis ah oo ka soo gaaray kulankii ay wajaheen Borussia Dortmund.
Sadio Mane ayaa ka maqnaan kara kulankan, halka Mohamed Salah, Roberto Firmino iyo Naby Keita aysan u badnayn inay ciyaaraan 90-ka daqiiqo ee ciyaarta.
Macallinka Man City ee Pep Guardiola ayaa xaqiijisay liiska xiddigaha uu kala hortagayo Liverpool, waxaana ka maqnaa kaliya Fernandinho iyo Benjamin Mendy oo dhaawacyo qaba.
>- Tani waa markii ugu horreysay oo ay FA Community Shield ku kulmaan kooxaha Manchester City iyo Liverpool, kulanka kale ee kaliya oo labadaan kooxood ku dhexmaray garoonka Wembley waxa uu ahaa Final-kii League Cup ee 2016-kii, markaasoo ay City 3-1 rigooreyaal ah ku adkaatay kaddib markii uu kulanku ku dhammaaday barbaro 1-1.
>- Tani waa markii todobaad ee kooxda qaada Premier League iyo kooxda laga qaaday ee kaalinta labaad ka gashay Premier League ay wada ciyaaraan koobkan FA Community Shield.
>- Kani waa markii 12-aad ee Man City ay ka soo muuqato koobka FA Community Shield, waxaana ay ku guuleysteen shan jeer oo ay ku jirto kulankii ay sanadkii hore ka hor tageen kooxda Chelsea.
>- Iyagoo magacooda lagu qoray koobkaan Community Shield 15-jeer ama ay shan iyo toban mar ku guuleysatay, Liverpool ayaa kulanka maanta noqon doonta haddii ay hanato kooxda labaad ee ugu guulaha badan tartankan, iyadoo ka dambeyn doonta Manchester United oo koobkan ku guuleysatay 21 jeer.
>- Man City ayaa guuldarro la’aan ah todobadii kulan ee ay ku ciyaartay garoonka Wembley, waxaana ay haysataa 6 guul iyo 1 barbaro, tan iyo guuldarradii ay Arsenal kala kulmeen 2017 semi-finalkii Emirates FA Cup, waxaana Sky Blue laga dhaliyey hal gool todobadaas kulan, halka iyaguna ay dhaliyeen 16 gool.
>- Man City ayaa koobkan Community Shield ku guuleysatay shan jeer, waana kooxda difaacanaysa kaddib markii sanadkii la soo dhaafay ay 2-0 kaga adkaadeen kooxdii uu hoggaaminayey Macallin Maurizio Sarri ee Chelsea.
>- Kooxda Muwaadiniinta lagu naanayso ayaa rikoor xun ka haysta guud ahaan kulamada ay wajahday Reds, waxaana ay guul ka gaareen kaliya 55 kulan 213 kulan oo ay wajaheen, marka la la barbardhigo Liverpool oo guuleysatay 104 kulan.
>- Inkastoo kooxda Man City ay xilli ciyaareedkii hore ku guuleysatay saddexleey koob maxali ah, haddana waxa ay rikoor xun ka haysataa marka ay wajahayso Reds, iyadoo kala kulantay 2 guul, 3 barbaro iyo 8 guuldarro 13-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay la kulmeen tartammada oo dhan.
>- Kooxda Pep Guardiola ayaa haddii ay maanta hanato koobkan, waxa ay ku guuleysan doontaa markeedii lixaad koobkan FA Community Shield.
Dib u eegis labadaan kooxood natiijooyinka min shantoodii kulan ee ugu dambeeyey:-
Liverpool 3-1 Lyon (31/07) Yokohama FM 1-3 Man City (27/07)
Liverpool 0-3 Napoli (28/07) Kitchee 1-6 Man City (24/07)
Liverpool 2-2 Sporting CP (25/07) Wolves 0-0 Man City (3-2 on pens – 20/07)
Liverpool 1-2 Sevilla (21/07) Man City 4-1 West Ham (17/07)
Liverpool 2-3 Borussia Dortmund (20/07) Man City 6-0 Watford (18/05)
Tababare Valverde oo u yeeray dhamaan ciyaartoyda uu heli karo kulanka Arsenal ee koobka Joan Gamper (Miyuu qeyb ka yahay Messi?)